सामाजिक सञ्जालमा ठगी - ५१ लाख गुमाएको यो कथाले प्रहरी नै अचम्ममा !
शुक्रबार, चैत्र ०९, २०७४ | Friday, March 23, 2018
प्रकाशित मिति: मंगलबार, फाल्गुण २२, २०७४
प्रकाशित समय: ७:४७:१३
सामाजिक सञ्जालमा ठगी – ५१ लाख गुमाएको यो कथाले प्रहरी नै अचम्ममा !
काठमाडौँ — कुनै अपरिचितले फेसबुकमार्फत उपहार परेको भनी पठाएको सूचना पत्याउँदै त्यसको लोभमा मान्छेले कति रुपैयाँसम्म खर्च गर्ला ? पैसाको जोहो गर्न कतिसम्म दौडधुप गर्ला र अपरिचितलाई कति पटकसम्म पैसा पठाइरहला ?
सोमबार सार्वजनिक भएको एउटा घटनाले प्रहरीलाई नै अचम्ममा मात्र पारेन, ठगीमा प्रविधि र हुन्डी कारोबारीको प्रयोग कसरी भइरहेको छ भन्ने तथ्यसमेत उजागर गरेको छ ।
स्नातक सकेका २५ वर्षीया दुई युवतीले फेसबुके साथीको फन्दामा परेर ५१ लाख रुपैयाँ गुमाएको यो प्रतिनिधि कथाले ‘डिजिटल डिभाइस’ मार्फत ठगीधन्दा बढिरहेको देखाउँछ । त्यस्ता पासोमा पढेलेखेकै व्यक्तिसमेत कसरी फसिरहेका छन् भन्ने पनि बुझाउँछ ।
पर्वत, कुर्घा स्थायी घर भई काठमाडौंको तीनकुनेमा बस्दै आएका पबी क्षत्री र लक्ष्मीदेवी चपार्इं छिमेकी र सहपाठी थिए । उनीहरू दुवै खुब मिल्थे । करिब दुई महिनाअघि एक दिन पबी बेलायती नागरिक बताउने ब्रायन लुसिया बकार नामको फेसबुक अकाउन्टसँग जोडिइन् । सामान्य कुराकानीबाट सुरु भएको उनीहरूको संवाद केही दिनमै मित्रतामा बदलियो । ब्रायनले एक दिन पबीलाई भने, ‘तिमीलाई उपहारस्वरूप ४४ हजार पाउन्डसहित केही सुन र हीराको हार पठाउँदै छु ।’ यस्तो खबर पाएको केही दिनमै पबीलाई हवाट्स एपमार्फत भारतबाट खबर आयो, ‘तिम्रो साथीले करिब एक करोड मूल्यबराबरको बहुमूल्य उपहार पठाएको छ । भन्सार क्लियरेन्स गर्न केही रकम चाहिने भयो ।’
उपहार आएको विश्वासमा पबीले भारतीय नागरिक बताउने ती व्यक्तिले भनेअनुसार रकम पठाउन थालिन् । तर भन्सारबाट उपहार छुटाउन धेरै पैसा लाग्ने थाहा पाएपछि पबीले साथी लक्ष्मीसँग साझेदारी गरिन्, उपहार ल्याउन दुवै मिलेर रकम खर्चिने र उपहार हात परेपछि बाँडेर लिने। प्रहरीका अनुसार यी दुवैले विभिन्न ९ पटक गरी ५१ लाख रुपैयाँ पठाएका थिए । पछिल्लो पटक भारतबाट फोन गर्नेले अब अन्तिम पटक थप ५ लाख भारु पठाइदिए उपहार भन्सारबाट छुटाउन सकिने बताएपछि युवतीहरू आफूहरू ठगिएको निष्कर्षमा पुग्दै महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाडौं पुगेका थिए ।
प्रहरीका अनुसार कुल रकममध्ये लक्ष्मीले १२ लाख ६० हजार रुपैयाँ खर्चेकी थिइन् भने अरू रकम पबी स्वयंको। अनौठो त यो छ कि सामान्य आर्थिक हैसियतका यी दुवै युवतीले उपहार प्राप्तिको आसमा आफन्त, चिने–जानेकासँग आफूहरू विदेश जान लागेको र रकम अपुग भएको भन्दै पैसा उठाएका थिए । त्यतिले नपुगेर ब्याजमा समेत पैसा लिएका थिए।
प्रहरीका अनुसार युवती र ब्रायनबीच सुरुमा फेसबुक म्यासेन्जरमार्फत भएको कुराकानीपछि हवाट्स एपमा सम्पर्क भएको थियो । पीडित युवतीबाट पैसा पठाउने क्रममा विभिन्न ९ तहमा मान्छे सक्रिय भएको अनुसन्धानमा देखिएको छ । परिसरका प्रवक्ता डीएसपी मोहन थापाका अनुुसार ‘ठगीको यो घटनामा नेपालभित्र र बाहिर बस्ने धेरै जनाको संलग्नता विभिन्न तहमा भएको देखिन्छ ।’ पीडित युवतीहरूलाई भारतीय नागरिकले हवाट्स एपमा फलानो व्यक्तिलाई रकम दिनु, उसैले पैसा यता पठाइदिन्छ भनेका थिए । त्यसपछि दुई युवतीले नागार्जुन ४ सीतापाइला बस्ने कुरियर कम्पनीका सञ्चालक जयराम कार्कीलाई ४ पटक पैसा दिएको देखिन्छ । जयरामले आफूले उक्त रकम सुनसरी, धरान घर भई खिचापोखरीमा दुर्गा ट्रेड इन्टरनेसनल नामक कस्मेटिक होलसेल पसलका सञ्चालक नारायण अग्रवाललाई दिएको बताएका छन् । अग्रवालले पटक–पटक गरेर ४६ लाख रुपैयाँ भारतको दिल्लीमा बस्ने पंकज अग्रवाललाई पठाइदिएको बताएका छन् । दिल्लीमा बस्ने पंकज पनि हुन्डीकै कारोबारी रहेको अनुसन्धानमा खुलेको छ ।
प्रहरीका अनुसार नारायण हुन्डी कारोबारीसमेत हुन् । उनी खाडीदेखि युरोप र अमेरिकाबाट समेत हुन्डीमा रकम ल्याउने काममा संलग्न भएको भेटिएको छ । प्रहरीले उनको पसलबाट १५ लाख ६२ हजार ९ सय २० रुपैयाँ बरामद गरेको छ । युवतीहरूले भारतमा रकम पठाउन विभिन्न मनी ट्रान्सफरको पनि प्रयोग गरेको देखिन्छ । तर काठमाडौंबाट पठाइएको रकम विभिन्न नेपाली हुँदै भारत पुगेको अनुसन्धानले देखाएको छ । अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीका अनुसार भारतीयले भनेअनुसार युवतीहरूले पाँचथरको फिदिम बस्ने बुढामाया थाम्सुहाङ, सुशीला थाम्सुहाङ, विमला थाम्सुहाङ, साधना किलिङका नाममा पटक–पटक गरेर ४ लाख रुपैयाँ पठाएका थिए ।
बेलायती नागरिक बताउने ब्रायनले हवाट्स एपमा युवतीसँग नेपालीमा पनि धेरथोर कुराकानी गरेको देखिन्छ । उपहार भारत आएको बताउनेले पनि नेपाली मिश्रित भाषामा कुरा गरेको देखिन्छ । प्रहरीका अनुसार ठगीको सञ्जालमा नेपालीहरूको पनि संलग्नता देखिएको छ । ब्रायनको फेसबुक सर्च गरेर प्रहरीले उनी सक्कली हुन् वा नक्कली भनेर अनुसन्धान थालेको छ । अहिले उसको फेसबुक अकाउन्ट निष्क्रिय छ । अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीले कोही नेपालीले नै ब्रायनका नाममा नक्कली अकाउन्ट बनाएर ठगीको पासो थापेको हुन सक्ने अनुमान गरे ।
विभिन्न विदेशी नाममा नक्कली फेसबुक अकाउन्ट, भाइबर र ह्वाट्स एपमार्फत उपहार वा चिट्ठा परेको लोभ देखाउँदै ठगी गर्नेको गिरोह नै सक्रिय भएको प्रहरीको ठम्याइ छ । यस्तै प्रकृतिको ठगीसम्बन्धी काममा संलग्न नाइजेरियन नागरिक मर्सेलुस सिगोची चिबुजीलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले गत शुक्रबार काठमाडौंबाट पक्राउ गरेको थियो । ब्युरोका प्रमुख डीआईजी पुष्कर कार्कीले भने, ‘आफैं सचेत नभएसम्म यस्ता प्रकृतिकाठगी रोकिँदैनन् ।’ यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
बहालवाला मन्त्रीकै मन्त्रालय गायब: के गर्दैछन् लालबाबु ?
शर्मा ४५ लाख धरौटीमा रिहा
कसरी बने ठाकुर ज्येष्ठ सदस्य ?
किम जोङ उनको नक्कली पासपोर्ट ?
दाईजो नपाएको झोकमा पत्नीको मिर्गौला गायब
पद र नगद बाँड्दै भोट माग्दै देउवा
प्रधानमन्त्री ओली र अब्बासी बीच भेटवार्ता सुरु
पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीलाई टुँडिखेलमा दिइयो ‘गार्ड अफ अनर’
ठग खोज्दा पक्राउ परे हुण्डी कारोवारी
संखुवासभा अनलाईन खादबारी मिडिया नेटवर्क प्रा.लि . द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाईन पत्रिका हो । इटहरीमा प्रधान कार्यालय रहेको यस अनलाईन पत्रिकामा देस बिदेसका समाचार, सामाजिक, राजनितिक, सुचना प्रविधि,मनोरंजन , खेलकुद लगायतका क्षेत्रका समचारहरु र विश्लेषणहरु समेटिन्छन । सत्य, तथ्य र सहि सुचना आम नागरिकहरुलाई दिने दायित्व यस अनलाईनले बोकेको छ ।
तपाईहरुको सल्लाह, सुझावले हामीलाई थप उचाईमा पुग्न सहयोग पुग्नेछ भन्ने अपेक्षा गरेका छौ ।
इटहरी -५ ,सुनसरी ,पूर्व बस स्ट्यान्ड छेउ
सम्पर्कः ०२५ -५८१९४४ /025-581944
स्पेसल अर्थ व्यापार
© २०७३ सर्वाधिकार सुरक्षित संखुवासभा अनलाइन -	Developed by Prabin D.